Nidaamyada Biogas ee salka ku haya saxarada doofaarka ee Argentina | Cusbooneysiinta Cagaaran
Magaalada Hernando ee gobolka Córdoba bilaabay shaqadii ugu horeysay nidaamka gaaska ma ahan oo keliya Argentina laakiin inta kale ee Koonfurta Ameerika oo ku saleysan xaarka doofaarka.
Nidaamka noocan ah waxaa horey looga adeegsaday Yurub iyo Mareykanka, laakiin waddamada kale wali waa mid cusub oo aan wax badan laga aqoon.
Beerta doofaarka, gaaska biogas waxaa lagu soo saaraa nidaam ka kooban microturbines oo si shaqsi ah loo rakibo marka ay soo saarayaan tamar ka dibna dheeri ahaan ay aadayaan shabakada bulshada, taas oo magaaladan iskaashi ka dhaxeyso.
Nidaamkan, koronto, gaaska iyo bacriminta dabiiciga ah oo dhamaantood ka yimaada saxarada doofaarka.
Hawlgalku waa iska fudud yahay, qashinka dabiiciga ah ee doofaarradu soo saaraan waxaa la geeyaa barkad ay ku baaba'aan bakteeriyada, waana sababta loo soo saaro gaaska noolaha, ka dibna waxaa loo diraa warshad yar si hadhow loogu qaybiyo tuubooyin ama loo soo saaro koronto microturbine.
Tiknoolajiyaddani waa mid fudud, waxaa laga maamuli karaa meel fog internetka ama dayax gacmeedka, waxay leedahay waxtarka kuleylka sare, waxay u oggolaaneysaa isukeenista iyo xitaa kicinta in lagu fuliyo isla qalab.
Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada dhismayaasha iyo tas-hiilaadka beeraha ama xoolaha, waxa isbeddelaya ayaa ah asalka maaddada dabiiciga.
Adeegsiga microturbines gaaska ku shaqeeya gaaska waa baddal si loo wajaho yaraanta iyo qiimaha sare ee korontada ee saameeya adduunka oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa in hay'adaha kale iyo shirkadaha ay tixgeliyaan nidaamkan gaaska noolaha maaddaama ay tahay mid aad wax ku ool ah, dhaqaale ahaan lagu rakibo oo siisa natiijooyin dhaqaale iyo deegaan oo aad u fiican.
Isticmaalka tamarta nadiifka ah waa ikhtiyaar sii kordheysa oo la heli karo maadaama ay jiraan teknoolojiyadyo kala duwan, qalab iyo nidaamyo loo baahan yahay iyo miisaaniyad kasta.
Isticmaalka gaaska noolaha waa inuu ku sii socdaa aduunka oo dhan maxaa yeelay waa il weyn oo laga helo tamar nadiif ah.
XIGASHO: Biodiesel.com. ar
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Biofuels » Biogas » Nidaamyada Biogas ee ku saleysan saxarada doofaarka ee Argentina
Spain waxay ka mid tahay wadamada sida weyn ugu tiirsan saliida